GanjaCoin V2 စျေး - အွန်လိုင်း GNJ ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို GanjaCoin V2 (GNJ)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ GanjaCoin V2 (GNJ) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ GanjaCoin V2 ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
GNJ – GanjaCoin V2
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ GanjaCoin V2 တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
GanjaCoin V2 များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
GanjaCoin V2GNJ သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0286GanjaCoin V2GNJ သို့ ယူရိုEUR€0.0242GanjaCoin V2GNJ သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0219GanjaCoin V2GNJ သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0261GanjaCoin V2GNJ သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.255GanjaCoin V2GNJ သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.18GanjaCoin V2GNJ သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.633GanjaCoin V2GNJ သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.107GanjaCoin V2GNJ သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0378GanjaCoin V2GNJ သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.04GanjaCoin V2GNJ သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.635GanjaCoin V2GNJ သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.221GanjaCoin V2GNJ သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.153GanjaCoin V2GNJ သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹2.14GanjaCoin V2GNJ သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.4.82GanjaCoin V2GNJ သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0392GanjaCoin V2GNJ သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0437GanjaCoin V2GNJ သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.89GanjaCoin V2GNJ သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.199GanjaCoin V2GNJ သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥3.05GanjaCoin V2GNJ သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩33.91GanjaCoin V2GNJ သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦11.07GanjaCoin V2GNJ သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽2.1GanjaCoin V2GNJ သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.785
GanjaCoin V2GNJ သို့ BitcoinBTC0.000002 GanjaCoin V2GNJ သို့ EthereumETH0.00007 GanjaCoin V2GNJ သို့ LitecoinLTC0.000525 GanjaCoin V2GNJ သို့ DigitalCashDASH0.000315 GanjaCoin V2GNJ သို့ MoneroXMR0.000321 GanjaCoin V2GNJ သို့ NxtNXT2.23 GanjaCoin V2GNJ သို့ Ethereum ClassicETC0.00421 GanjaCoin V2GNJ သို့ DogecoinDOGE8.25 GanjaCoin V2GNJ သို့ ZCashZEC0.000347 GanjaCoin V2GNJ သို့ BitsharesBTS0.88 GanjaCoin V2GNJ သို့ DigiByteDGB0.914 GanjaCoin V2GNJ သို့ RippleXRP0.101 GanjaCoin V2GNJ သို့ BitcoinDarkBTCD0.000985 GanjaCoin V2GNJ သို့ PeerCoinPPC0.0948 GanjaCoin V2GNJ သို့ CraigsCoinCRAIG13.02 GanjaCoin V2GNJ သို့ BitstakeXBS1.22 GanjaCoin V2GNJ သို့ PayCoinXPY0.499 GanjaCoin V2GNJ သို့ ProsperCoinPRC3.59 GanjaCoin V2GNJ သို့ YbCoinYBC0.00002 GanjaCoin V2GNJ သို့ DarkKushDANK9.17 GanjaCoin V2GNJ သို့ GiveCoinGIVE61.89 GanjaCoin V2GNJ သို့ KoboCoinKOBO6.51 GanjaCoin V2GNJ သို့ DarkTokenDT0.0263 GanjaCoin V2GNJ သို့ CETUS CoinCETI82.54
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 14 Aug 2020 10:45:03 +0000.